Any Etazonia, samy nilaza ho nahita tombom-barotra mihoatra amin’izay nandrasana ny Google, ny Apple, ny Facebook, ary ny Amazon. Ohatra, ny Amazon, nahazo tombom-barotra 5,2 miliara dolara nandritra ny telo volana faharoa tamin’ity taona ity, avo roa heny no ho ny tamin’ny taon-dasa. Marihina anefa fa vao nampiasa vola 4 miliara dolara ny Amazon ho fiatrehana ny fihanaky ny valanaretina. Nanomboka ny volana marsa teo, 175 000 ny asa vaovao ao amin’ity orinasa ity. Ireo miasa mampivoatra ny nomerika ireo no nahita tombontsoa lehibe indrindra raha tafiditra anaty fatiantoka ireo sehatrasa hafa ankapobeny.
Miankina amin’ny tetibola ny famatsian-drano amina firenena maro aty Afrika ho fiatrehana izao valanaretina Covid-19 izao. Amin’izao fotoana izao, miisa 2,2 miliara ny mponina tsy mahazo famatsian-drano madio, ary any amin’ny faritra mahantra ny ankamaroan’ireo. Mila tetikasa maro hiadiana amin’izany. Tokony ho laharam-pahamehana amin’ny tetibola faritan’ny governemanta tsirairay avy ary mitaky fiaraha-miasa. Manambara ny tanjaky ny toekarena ao aminy ny famatsian-drano, endriky ny fitsaboana ao amin’ny tany iray.
Mety hihavitsy ny sambo lehibe avy any Azia hiditra aty amin’ny kaontinanta afrikanina. Tsy maintsy hisokatra ny toekarena maneran-tany ka mahalana vao handalo aty Afrika araka ny politika fanarenana ataon’ny tompon’ireny sambo ireny. Misy ihany anefa ireo sambo azo antoka fa hiditra aty Afrika, ohatra, ny Pacific International Lines (PIL) avy any Singapour, saingy eo amin’ny varotra no mety hanahirana. Tsy mitovy ny tinady na ato amin’ny samy kaontinanta afrikanina aza. Mbola olana hafa ihany koa ny amin’ireo sambo mpitondra solika noho ny vidin-tsolika mitotongana.